Tidung Lagoon Resort Block C Ocean & Island umbono
Silawula iTidung Lagoon Resort eTidung Island, 1 hr North West of Jakarta ngeSpeedboat.Yeyona ndawo yokuphumla kwiSiqithi kwaye yakhiwe kumgangatho wolwandle.Ungahlala, utye, udlale kwaye uphumle kwindawo yethu yokuphumla. Sinikezela ngokuzola, ukuphumla, kunye nepanoramic kwiziqithi ezintle zaseIndonesia.
Yiza uhlale nathi. Ukwaneliseka kwakho kukuqwenga kwethu ngonaphakade. Ixabiso lethu ngomntu ngamnye kwaye sele libandakanya itikiti lesikhephe, i-3x Ukutya (i-buffet), ikhefu lekofu eli-2x, i-pickup, i-snorkeling kunye nomdlalo wamanzi
Kukho amagumbi ali-18 akhoyo kunye negumbi eli-1 elikhulu lokungena kunye negumbi lokutyela. Onke amagumbi ajongene nolwandle ngombono wepanoramic kwisiqithi.Sinezibuko lethu apho unokumisa khona isikhephe sakho okanye ube netheko lakho leBBQ apho.Igumbi ngalinye lingahlala abantu aba-4. Iqela ngalinye liya kuba negumbi lalo labucala kwaye ANGAbelani nabanye.
Unxweme olunesanti emhlophe lulungile nje phambi kwendawo yethu yokuchithela iholide. Unokundwendwela imyuziyam yamathambo eentlanzi, iziko lolondolozo lwezonka, amasimi esonka, amasimi ekhokhonathi, ulondolozo lwe-coral reef, ulondolozo lweefudo, ukuhamba ngaphezulu kwe-700m Lover Bridge, indawo yokulima iintlanzi, kunye nezinye ezininzi esiqithini.
Zininzi iintlanzi ezijikeleze indawo yethu yokuphumla ukuba uyathanda ukuloba. Okanye ke kufuneka uzame ukuloba ingwane.
Kukho nje imisebenzi emininzi ekhethekileyo elindele ukuba uphonononge.
Uya kuhlala kwindawo yethu yokuphumla ngaphezulu kolwandle. Iyure enye NW ukusuka eJakarta. Ngamava awodwa ingakumbi abo bathanda ukuphuma bayonwabele iilwandle kunye nolwandle.Ixabiso lakho elidweliswe ngomntu ngamnye kwaye sele libandakanya ukuthutha (uhambo oluya nokubuya Speedboat), i-3x yokutya okupheleleyo (isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa nge-buffet style), i-snack ikofu / iti (ngo-9: 30 kunye no-15: 00), amanzi okusela, umdlalo wamanzi. (iphenyane lebhanana/ukukhwela ikhaphethi/sofa), izixhobo zokukhwela inqanawa, i-pickup esuka kwindawo yokuhlala, njl.Ezothutho luhambo oluya nokubuya eSiqithi. Ngeshedyuli, nceda ujonge iwebhusayithi yethu.
Abasebenzi bethu bayafumaneka nanini na ukukunceda kwaye bakuncede. Zikwakhona ukuze zisebenze njengesikhokelo sokhenketho ukuya esiqithini okanye nje inkampani wena kunye nosapho lwakho lokudlala i-snorkeling okanye ukuloba.